BARADHADA LEMON: SHARAXAAD KALA DUWAN, SAWIR, DABEECADO, SIFOOYIN - BEER CAGAARAN
Kala duwanaanshaha baradhada "Limonka": sharaxaadda kala duwanaanta, sawirada, astaamaha
"Lemon" (magaca kale - "Picasso") waa noocyo baradho ah oo laga sameeyey Holland. Sida uu qabo qaan-gaadhka, waxay ku xiran tahay nooca dhexe-goor dambe.
Tilmaamidu waa xaqiiqda ah in nooca beergooyska uu gebi ahaanba kala duwan yahay: cabbirka kala duwan ee miraha, dhadhanka, dhalidda baradhada, iwm. Waxaa si ballaaran loogu qaybiyey Ukraine, ee Belarus.
Baradhada Lemon: sharaxaad kala duwan
Magaca dugsiga Lemon (Picasso)
Sifooyinka guud Barafka miisaanka xilli-ciyaareedka ee Holland ayaa u dulqaadanaya abaar iyo heerkul sarreeya
Wakhtiga uurka 110-130 maalmood
Mawduucyada Starching 10-12%
Dad badan oo digriiga ganacsiga ah 80-140 gr
Tirada digriiga duurka ilaa 20
Yield 200-500 c / ha
Tayada macaamilka dhadhanka caadiga ah, ee ku haboon saladh iyo shiil
Soo kabashada 90%
Midabka maqaarka Jaale huruud ah casaan
Midab daruuf kareemka
Gobollada la doorbido Central, Central Black Earth
Cadaadiska cudurada oo u nugul NTN-virus, si dhexdhexaad ah u adkaysata dabaysha goor dambe ee caleemaha iyo fayraska cursida caleen, adkaysi u ah dhammaan cudurada kale ee baradhada
Noocyada sii kordhaya pre-biqilka lagu taliyey, waxay u baahan tahay qiimaha bacriminta korodhay
Asalka AGRICO U.A. (Holland)
Awooda korriinsho ee duurka oo leh dherer dheer qaro weyn. Caleemuhu waa cagaar madow oo midab leh iyo mid dhexdhexaad ah. Xilliga ubaxyada dhirta waxay u muuqdaan ubaxyo yaryar, sida cad.
Miraha waa mid yar ama dhexdhexaad ah, sinnaan-qaabeeya, u eg pear. Maqaarka barafka waa midab khafiif ah ama jaalle ah oo leh indho casaan yar.
Gudaha midhaha, jidhku waa midab liin leh oo ah caleemo-caleemo (markaa magaca), dhexdhexaad ah oo casiir leh iyo macaan. Inta lagu jiro xilliyada abaarta, miraha waxay leeyihiin dhadhan dhadhan.
Tan iyo baradho liin ayaa iska leh noocyada dhexe-dhexe, baradho oo kaliya wuxuu bilaabaa inuu daadiyo kaliya dhamaadka Agoosto - horraantii Sebtembar (badanaa inta lagu jiro xilliga xagaaga Indian).
Bisaylka miraha wuxuu dhacaa hal mar.Sidaa daraadeed, isticmaalkooda wuxuu qaadan karaa 12-15 maalmood.
Miisaan ahaan, hal tubo ayaa gaari kara 100-120 garaam. Qodobka Naadiga ah ee ka baxsan kama badna 10%, taas oo ah tiro yar oo la barbardhigo noocyo kale, iyo tirade duurka ayaa inta badan gaaraya 20 gogo '.
Waxaad isku barbardhigi kartaa jaantuska noocyada kala duwan ee isticmaalaya jadwalka hoose:
Magaca dugsiga Tirada digriiga duurka
Picasso ilaa 20
Jelly ilaa 15
Tafsiir 6-10 gogo '
Lilea 8-15 gogo '
Tiras 9-12 gogo '
Elizabeth ilaa 10
Vega 8-10 gogo '
Romano 8-9 gogo '
Gypsy dumar 6-14 gogo '
Gingerbread Man 15-18 gogo '
Cornflower ilaa 15
Baradhada Lemon qurux aan qabyo ahayn. Way adagtahay carrada, sidaas darteed waxay ku habboon tahay in laga beerto meelaha ugu kala duwan ee Ruushka iyo dalalka kale.
Waxyaalaha kala duwan ee noocyada kala duwan waxaa loo aaneyn karaa xadka sarreeya. Sida soo saaridda, marka ugu horeysa ee tilmaamayaashu way kala duwanaan karaan, laakiin 8-9 sano kadib, xasilloonida way soo hagaagaysaa, tiraduna waxay gaartaa heerar sare oo ah 200-500 oo hektar halkii hektar.
Jadwalkan hoos ku xusan waxaad ku baran kartaa tilmaamahan sida tayada iyo dhalidda ee baradho ah noocyo kala duwan:
Magaca dugsiga Yield Soo kabashada
Nasiib wacan 420-430 c / ha 88-97%
Latona ilaa 460 c / ha 90% (iyadoo ku xiran maqnaanshaha kondensate ee kaydinta)
Kamensky 500-550 97% (hore u biqilaad ah heerkulka kaydinta sare + 3 ° C)
Timo ilaa 380 kg / ha 96%, laakiin digriiga ayaa hore u soo gurguhu
Kala duwanaanta baradhada Lemonka waa warshad aan la qabin, sidaas darteed shuruudaha daryeelkoodu wuxuu noqon karaa mid aad u yar. Waxa kaliya ee loo baahan yahay in la tixgeliyo marka la beerto - fogaanta u dhaxaysa godadka.
Sababtoo ah laanta faafa, farqigu waa inuu ahaado 45-50 cm oo dheerba midba midka kale. Haddii xeerkan aan la raacin, duurka ayaa xannibaya midba midka kale, ka hortaga qorraxda qoraxda, taasoo keeni karta dhimashada dhirta.
Sida dhaqanka beeraha, waa heer. Waxaad isticmaali kartaa huurka dhirta - gacanta ama gacan ka geysashada socodka gadaashiisa, mulching inta u dhaxeysa saf, waraabinta, iyo beerashada bacrimin.
Waxa kale oo kuu oggolaanaya inaad bixiso macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan sida loo abuuro baradhada, goorta iyo sida loo dalbado bacrimin.
Iyo sidoo kale sida loo sameeyo marka la beero iyo kaas oo ah quudinta ugu fiican.
Fiiri hoosta: Sawirada kala duwan ee baradhada
Kala duwanaantan ayaa leh faa'iido kale oo muhiim ah dadka kale: Baradhada liinta u adkaysata dhammaan noocyada fayrasyada iyo cudurada.
tuber-xumada dabeysha goor dambe;
Si kastaba ha noqotee, dhirta ayaa u nugul duufaanta goosgooska iyo caleenta caleenta.
Sida cayayaanka, baradho baradho ah Colorado iyo dirxiga, wireworms, dhirta malab, Baalallay baradho ayaa inta badan halis u ah baradho. Laakiin waxaa laga heli karaa guddiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loola macaamilo:
Sidee looga takhalusaa wireworm ee beerta.
Waxaan burburinnaa Medvedok hababka dadweynaha iyo diyaarinta kiimikada.
Dagaalka aboorka baradhada: kimistaanka - qaybta 1 iyo qaybta 2.
Dhamaanba ku saabsan dagaalka ka dhanka ah Colorado baradho baradho - hababka dadweynaha iyo macnaheedu waa:
Baradhadu waxay leeyihiin sifooyinka sare ee dhadhanka.
Sababtoo ah kala duwan ee razvarivaemosti dhexdhexaad ah ee baradho ah liin loo isticmaalo diyaarinta cuntooyinka kala duwan: laga bilaabo baradho dhaqameed la kariyey si baradho la shiiday.
Digriiga ayaa awood u leh inay ilaaliyaan muuqaalkooda suuqyada muddo dheer, sidaas awgeed alaabada aadka loo dalbado suuqyada iyo dukaamada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan kaydinta baradho, waqtiga iyo heerkulka, shuruudaha dukaanka khudradda, dhibaatooyinka ka soo baxa. Iyo sidoo kale sida loo keydiyo xididdada jiilaalka, aqalka iyo qolka, balakoonka iyo sanduuqyada, qaboojiyaha iyo diiray.
Waxaa la og yahay in Ruushku doorbidaan "baradhada cad" si "huruud". Si kastaba ha ahaatee, "Limonka" waa noocyo aad u badan oo ku yaala Ruushka, gaar ahaan gobollada Bartamaha iyo Bartamaha Black Earth.
Soo koobid, waxaan dhihi karnaa noocyo baradho ah Lemon waa xulasho aad u fiican beeritaanka beertaada.
Iyada oo ay sabab u tahay unpretentiousness, dhirta waa awoodaan inay ubaxyada iyo dhali midho ah xaalado kala duwan, si guul leh iska caabin ah nooc kasta oo cudurada. Oo dhadhankiisiina ma daadin doono qofkii cawlooba.
On our site waxaad ka heli doontaa macluumaad badan oo faa'iido leh oo ku saabsan hababka kala duwan ee baradho sii kordhaya. Waxaad baran doontaa tiknoolajiyada Dutch, sida loo daryeelo noocyada hore iyo helitaanka wax-soo-saarka wanaagsan iyada oo aan la jarin iyo hilling iyo samaynta qorshe ganacsi oo wanaagsan oo baradhada sii kordhaysa iyada oo qayb ka ah ganacsiga. Waxaan sidoo kale kuu soo bandhigi doonaa qaababka noocan oo kale ah: caws engegan, laga bilaabo abuurka, bacaha, foostooyinka, sanduuqyada.
Hoos waxaa ku qoran mowduucyada ku saabsan maadooyinka baradho leh shuruudaha kala duwan:
Xilliga bartamaha Gaar ahaan hore Xilliga dhexe
Rabo Elizabeth Lorch
Furan Vega Margarita
Lilac fog Romano Sonny
Weyn Muuqaalka Zhuravinka